ပါမောက္ခဒေါက်တာစောဝင်းသည် မြန်မာ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆေးပညာဘွဲ့ ၊ ကလေးကျန်းမာပညာဒီပလိုမာဘွဲ့ ၊ ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့)၊ MRCP FRCP MRCPCH DCH DTM&amp;H နှင့် ဆေးပညာသင်ကြားရေးဒီပလိုမာဘွဲ့ များ ရရှိထားသည်။
မောင်မြင့်ဆန်းအောင် သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မြေးဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် မိုက်ကယ် အဲရစ် တို့၏ သားဦးဖြစ်သည်။
ရီးရှော့စပီတေလူး သည် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ တွင်အကြီးဆုံးဆေးရုံများနှင့် ကိုပင်ဟေဂင် ရှိအထူးပြုအထူးပြုဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးရုံ၏အဓိကအဆောက်အအုံသည် ၁၆ ထပ်အမြင့်ရှိအဆောက်အအုံဖြစ်ပြီးမြို့၏အလယ်ပိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရိဂ်ဆဟောရှပိတေဦသည် နီပေါနိုင်ငံ ၊ ကိုပင်ဟေဂင် ရှိ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံဌာန ကိုတည်ရှိသည့် Panum အဆောက်အအုံ နှင့် မိတ်ဖက်ဆေးရုံးဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြားရေးဆေးရုံ အနေဖြင့် Copenhagen တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်အမည်ကိုများသောအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားခြင်းမရှိပါ။ ရိ Rigs ရှေ့အစ စကားလုံးကိုဒိန်းမတ်ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများ၏အမည်များတွင် ...
ဘေးဒုက္ခကျရောက်ခြင်းကြောင့်အအောင်ပေးရခြင်း သည် မြို့ပြဒဏ္ဍာရီ သို့မဟုတ် ကောလဟာလတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ဘေးဒုက္ခဖြစ်ရပ်တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး စာမေးပွဲကိုမကျင်းပနိုင်ပါက ထိုကျောင်းသားများအား အောင်မှတ်ပေးနိုင်ရန် ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မိမိလေးမှာ၂၄.၈.၁၉၅၂ခုနှစ်တွင်ပဲခူးရိုးမအတွင်း၌အမျိုးသမီးရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာ၊ဗ မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဥက္ကဌသခင်သန်းထွန်း၏စီစဉ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ထားဝယ်မြို့ရှိမိခင်၏ညီမရင်းဖြစ်သူဝတ်လုံတော်ရရှေ့နေကြီးဒေါ်ခင်သန်းထံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။မိခင်ဒေါ်မိမိလေး၏မောင်အရင်းဖြစ်သူမှာနဂါးနီစာအုပ်အသင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်နဂါးနီဦးထွန်းအေးဖြစ်ပြီးဒေါ်တင်ထွေးမူ၏ဦးလေးတော်စပ်လေ သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသခင်ဗသိန်းတင်မှာဗမာပြည်ကွန်မြုနစ်ပါတီဗဟို၏တာဝန်ပေးချက်အရတရုတ်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့အဆက်အသွယ်၊အကူအညီနှင့်ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုရရှိစေရန်အဝေး ...
တွေးတောကြောက်လန့်နေကြရမည်ဟု မဆိုသော်လည်း လူတို့တွင် ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် အမျိုး ပေါင်း များစွာ ရှိသည်ကို သတိပြုသင့်၏။ လူသည် အချိန်အခါမရွေး သေတတ်၏။ ထိခိုက်ရှနာ တတ်၏။ နာမကျန်းဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအတူ လူတို့၏ပစ္စည်းများသည်လည်း အချိန်မရွေး ရန်သူမျိုး ငါးပါး အဖျက်အဆီးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကံမကောင်း အကြောင်း မလှ၍ဖြစ်စေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ဘေး အန္တရာယ်နှင့် အပျက်အစီးများမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း အခါမရွေး တွေ့ကြုံရသော ဖြစ်စဉ်ပင် ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုလုံးအတွက် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်သူ တစ်ယောက်သည် ငွေကြေးစုဆောင်းပြီးမရှိမီ သေဆုံးသွားလျှင် ကျန်ရစ်သော အိမ်ထောင်များ အတိဒုက္ခရောက်ကြသည်သာ များ၏။ ထိုမှတစ်ပါး ပ ...
Shu Han 蜀漢 ၂၂၁ မှ ၂၆၃၊ ဘုရင်သုံးပါးစဉ်ကာလအတွင်းတည်ရှိခဲ့သော Han Chinese မင်းဆက်။ ဟန်မင်းဆက် 漢 / - ဘီစီ ၂၀၆ - အေဒီ ၂၂၀၊ မင်းဆက်သည်ခေတ်နှစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်အနောက်ဟန်နှင့်အရှေ့ဟန် ဟန် ပြည်နယ် 韓 ဘီစီ ၄၀၃–၂၃၀၊ စစ်ပွဲကာလအတွင်းပြည်နယ်ဖြစ်သည် ဟန် Western Zhou ပြည်နယ် 韓 ဘီစီ ၁၁ ရာစု - ဘီစီ ၇၅၇၊ နွေ ဦး နှင့်ဆောင်း ဦး ကာလတို့တွင်ပြည်နယ် နောက်ပိုင်းတွင်မင်း ၅ မင်းဆက် 後漢 ၉၄၇-၉၅၁၊ ပြည်နယ် ၅ ခုနှင့်နိုင်ငံ ၁၀ ခုအတွင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၃၁၉ မတိုင်မီ Han 漢 ဟုသိကြသောနိုင်ငံတော် ၁၆ ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Zhao ၃၀၄-၃၂၉ ဟောင်း ၊ တောင်ပိုင်းဟန် 南漢 ၉၁၇-၉၇၁၊ ပြည်နယ် ၅ ခုနှင့်နိုင်ငံ ၁၀ ခုအတွင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြ ...
မြန်မာ့သနပ်ခါးယဉ်ကျေးမှု မြန်မာနှင့်သနပ်ခါးသည်ခွဲခြား၍မရသည့်မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့ အ စည်းအတွင်းသနပ်ခါးလိမ်းသည့်အလေ့အကျင့်ကိုရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် စတင်ခဲ့ သည်ဟုယူဆထားကြသည်။သနပ်ခါးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှေးဟောင်းသုတေသန အထောက် အထားများ အဖြစ် ပုဂံခေတ် ၊အေဒီ ၁၁၁၃ ခုနှစ်မှာ တည်ခဲ့ သည့်မြင်းကပါကူပြောက်ကြီး ဘုရားနံရံ ဆေးရေး ပန်းချီများ တွင်လည်းကောင်း၊ အေဒီ ၁၁၈၃ ခုနှစ်တွင်တည်ခဲ့သည့်စူဠာမဏိဘုရားအတွင်းနံရံပန်းချီများတွင် လည်းကောင်း ခေတ် အဆက်ဆက် တည်ထောင်ခဲ့သောဂူဘုရား၊များရှိနံရံပန်းချီများတွင်လည်းကောင်း သနပ် ခါးလိမ်းခြယ်သည့် ဓလေ့ ကိုသရုပ်ဖေါ်ရေးဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို ...
နာရူတို သည် ဂျပန်ရိုးရာ အန်နီမဲ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသော အန်နီမဲများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နာရူတိုကိုရေးသားသူမှာ မာဆာရှိကီရှီမိုတို ဖြစ်ပါသည်။ ဇာတ်လမ်းမှာ ဥဇူမာကီ နာရူတို အမည်ရသော ဆယ်ကျော်သက် နင်ဂျာပေါက်စလေး သည် သူ့ကို တစ်ရွာလုံးက အသိအမှတ်ပြုရန်ကြိုးစားပုံနှင့် သူတို့ ဒေသ၏ အကြီးအကဲကို လေးစားမှုနှင့် သူတို့ဒေသခေါင်းဆောင် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပုံကို ဇာတ်လမ်းဆင် ရိုက်ကူးထားပါသည်။ နာရူတိုဇာတ်လမ်းတွဲများသည် Akamaru Jump ဟူသော တစ်ခန်းရပ် အန်နီမီး ဇာတ်လမ်းတို ကနေစတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ Naruto ကို Shueisha မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သော Weekly Shōnen Jump တွင် ၁၉၉၉ မှ ၂၀၁၄ အထ ...
ကာရပိတိယသင်ကြားရေးဆေးရုံ သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ဂယ်လီမြို့၊ ကာရပိတိယဆင်ခြေဖုံးအရပ်တွင် တည်ရှိသည့် ဆေးရုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ တောင်ပိုင်းစီရင်စုနယ်တွင် အကြီးဆုံးသော တတိယအဆင့်ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာလည်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရုဟုနတက္ကသိုလ်၊ ဆေးပညာဌာန၏ အဓိကသင်ကြားလေ့ကျင့်မှုများ လုပ်ရာနေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ဆေးရုံတွင် ခုတင်ပေါင်း ၁၆၂၄ ခု၊ အခန်းပေါင်း ၅၄ ခန်းနှင့် အခြားများစွာသောဌာနများဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး တတိယဆင့်ရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသည့်ဆေးရုံ ဖြစ်သည်။ ကာရပိတိယဆေးရုံတွင် တောင်ပိုင်းစီရင်စုနယ်ရှိ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည ...
ဂျက်ဖနာသင်ကြားရေးဆေးရုံ သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ဂျက်ဖနာမြို့တွင် တည်ရှိသည့် အစိုးရဆေးရုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်သည် မြောက်ပိုင်းစီရင်စု၌ အရေးပါသည့်ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုလံဘိုရှိ ဗဟိုအစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားသည့် စီရင်စုရှိ တစ်ခုတည်းသော ဆေးရုံဖြစ်သည်။ မြောက်ပိုင်းစီရင်စုရှိ တစ်ခုတည်းသော သင်ကြားရေးဆေးရုံလည်း ဖြစ်သည်။ ဂျက်ဖနာတက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာနအတွက် အဓိကကျသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်ကြားရေးဆေးရုံ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဆေးရုံ၌ ခုတင် ၁၂၂၈ ခု ရှိသည်။ ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါးနှင့် ကုသမှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် cardiology, diabetic, dentistry, dermatology, family planning, gynaecology, neurology, obstetrics ant ...
၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးသော စစ်အာဏာသိမ်းပိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုအစိုးရကိုဖြုတ်ချခဲ့၍ တော်လှန်ရေးကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းကာ စတင်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် တိုင်းပြည်ကိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသို့အာဏာသိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်အထိ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြင့် ၁၂ နှစ်မျှအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကာလ၌ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းသည် တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍကိုသာမက အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍတို့ကိုပါ ကိုယ်တိုင်ချယ်လှယ်နိုင်အောင် ဆေ ...
အခြေခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် သည် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့တွင် တည်ရှိသည်။ တက္ကသိုလ် သည် အခြေခံကျန်းမာရေးဘွဲ့ကို လေးနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားစေပြီး နောက်တစ်နှစ်တွင် မဟာဘွဲ့ကို ပေးအပ်သည်။
တက်ရောက်သင်ကြားသော ကျောင်းသားများသည် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကို သင်ကြားရပြီး ပဏာမ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမမှီသော ကျေးလက်ပြည်သူများအတွက် ဆေးကုသမှုများပါ သင်ကြားပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဘွဲ့ရသူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန အောက်တွင် ကျန်းမာရေးမှူးများအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရသည်။ သူတို့သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရှိသော ကျေးလက်ပြည်သူများအတွက် အရေးကြီးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးသူများဖြစ်သည်။
ဆေးဆရာဝန်ရှားပါး၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ခက်ခဲပြီး လက်လှမ်းမမှီသော ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် ရည်ရွယ် ၍ ဦးနုအစိုးရ၏ ကျန်းမာရေးပေါ်လစီအရ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးမှူးသင်တန်းကျောင်းကို ရန်ကုန်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းကျောင်းကို ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်သို့လည်းကောင်း၊ ၁၉၆၈ တွင် လှည်းကူးသို့လည်းကောင်း ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ထိုကျောင်းသည် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးမှူးသင်တန်းကျောင်းနှင့် အောင်ဆန်း Health Demonstration Unit ကွင်းဆင်းဌာန တို့ ပူးပေါင်း၍ အခြေခံကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက် ကျန်းမာရေးသိပ္ပံကျောင်း School of Health Science for Basic Health Workers အဖြစ် အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတဖန် University of Community Health အခြေခံကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် / လူထုကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ် အဖြစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အဆင့်မြင့်တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ကွင်းဆင်းဌာနကိုလည်း စလင်းမြို့နယ် တောစိမ့်ရွာသို့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။
ကွင်းဆင်း သုတေသန ဌာန တောစိမ့်ရွာ၊ စလင်းမြို့နယ်
ပညာရေး သိပ္ပံ ဌာန
နှစ်စဉ် ဇန်နဝါရီလ မှ အောက်တိုလ အထိ တက်ရောက်သင်ကြားရသည်။ နောက်ဆုံးနှစ်တွင် ကျောင်းသားများသည် ရေးဖြေ၊ နှုတ်ဖြေ၊ ဆေးရုံတွင် လက်တွေ့ဖြေ၊ ကွင်းဆင်း၊ အစရှိသည်တို့ကို ဖြေဆိုကြရသည်။
ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်း နှင့် ကာကွယ်ခြင်း
မွေးဖွားမှု၊ အိမ်ထောင်မှု၊ သေဆုံးမှု စာရင်းအင်းပညာ
လူထု ကျန်းမာရေး ၂
လူထု ကျန်းမာရေး ၁
နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားများသည် ပရိုတိုကော အတွက် သုတေသနစာတမ်းပြုလုပ်ရန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန များသို အောက်တိုဘာလမှ နိုဝင်ဘာအထိ သွားရောက်နေထိုင်ရသည်။
4. ပေါင်းစည်းချိတ်ဆက်ထားသော ဆေးရုံများ
ကျောင်းသားကျောင်းသူများသည် ဆေးရုံတွင် ၃ လတာ လက်တွေ့ဆင်းရန် အတွက် အောက်ပါ ဆေးရုံများ ရှိသည်။
ညောင်ဦး ပုဂံ ဆေးရုံ
ကျောင်းသားများသည် မိမိတို့၏ သုတေသနစာတမ်းအတွက် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန သို့ ၈ ပတ် သွားရောက် လေ့လာရန်လိုသည်။
5. ဘွဲ့ အစီအစဉ်
ထိုတက္ကသိုလ်သည် ၄ နှစ် တက်ရောက်ပြီးပါက ကျန်းမာရေးသိပ္ပံဘွဲ့ Bachelor of Community Health: B.Comm.H ကို ပေးအပ်သသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကျန်းမာရေး မဟာ သိပ္ပံဘွဲ့ Master of Community Health: M.Comm.H ကို ပေးအပ်သည်။